Ny programa fanamarinana OCP na Oracle dia mibaribary noho ny fampiasana ny orinasam-pandaharana Oracle, zavatra ary ny fitantanana. Ny fandaharanasa fanamarinana dia natao tamin'ny Oracle ary manome fanantenana ny fianarana sy ny fahaiza-manao fantatra amin'ny fampiasana ny fanatitra Oracle. Ireo tompon'andraikitra fanamarinana Oracle dia ampiasaina amin'ny fikambanana MNCs, Fortune 500 sy fikambanana hafa ivelan'ny faritra, ary mametraka ny fiantsoana tena mahavariana sy mandaitra amin'ny sehatra na ny Teknolojia momba ny fampahalalam-baovao, ny fitantanana database, ny angona lehibe, ny rahona ary ny fizarana mifandraika amin'izany.
Ny fanamarinana Oracle dia omena amin'ny 9 sehatra mekanika miavaka, anisan'izany ny Database, Application, Java sy Middleware, Systems, Oracle Cloud, Operating Systems, Enterprise Management and Virtualization. Ny mari-pankasitrahana momba ny orinasan'ny Oracle dia tena manan-danja tokoa vokatry ny fisian'ny fiaramanidina marina sy ampiasaina. Ireo mari-pankasitrahana ireo dia atolotra amin'ny sehatra maro samihafa ary mametraka anao amin'ny fomba mandroso amin'ny fandrosoana amin'ny asa. Fehiny vitsivitsy izay ahafahan'ny Oracle mari-pankasitrahana avy amin'ny Oracle:
Oracle Certified Associate Certification: Ny fianarana ambony dia mampianatra ny fahaiza-manaon'ny mpifaninana iray amin'ny fitantanana sy ny fandaminana.
Oracle Certified Professional Certification: Ireo manam-pahaizana ireo dia afaka miatrika ireo tahiry goavana ary koa mamorona fampiharana tena sarobidy amin'ny asa fandraharahana.
Oracle Certified Master Certification: Ity fanomezan-dàlana ity dia manome fahafahana hijery tsara sy hikaroka ireo rafitra momba ny fandaharam-potoana ary ny fampiharana mifandray amin'izy ireo.
Oracle Certified Expert Certification: Ity fanamarinana ity dia mampiseho fa manam-pahaizana manokana ianao ary mianatra amin'ny sehatra samihafa, fandrosoana sy famolavolana drafitra.
Ny tombony amin'ny fanamarinana Oracle ho an'ny mpifaninana
Ny tombony amin'ny fanamarinana Oracle ho an'ny fandaminana
Oracle Developer Application
Ny fanamarinana Oracle amin'ny sehatra toy ny Oracle DBA sy ny hafa dia manome tombontsoa maro ho an'ireo mitazona azy ireo. Anisan'izany ireto:
Fampiakarana amin'ny fanonerana na ny fahazoana
Valim-bavaka tsaratsara kokoa
Fandrosoana bebe kokoa
Fiovana amin'ny fahaiza-manao sy fahaizana
Fahatakarana mafonja ny teknolojia
Fanamarinana marika iray tsy maintsy tanterahana amin'ny famaranana ny fitsapam-pahaizana momba ny fanjakana. Ireo mari-pankasitrahana Oracle dia manana fahamendrehana avo lenta sy kalitao avo lenta ary famantarana famantarana.
Ny orinasa dia mahazo tombontsoa maro be amin'ny famolavolana mpifaninana iray izay manana Oracle DBA na fanamarinana Oracle hafa. Anisan'izany ireto:
Fepetra tsara kokoa ho an'ny faharetana
Ny famonoana bebe kokoa amin'ny asa
Fanatanterahana asa mahatalanjona kokoa
Hihena be ny fampiofanana
Valim-panajana kokoa amin'ny mpanjifan-draharaha ary ny fitombon'ny fiheverana amin'ny tsena
Ny fisokafan'ny asa ataon'i Oracle dia tsy azo ihodivirana satria ny rafitra Oracle sy ny fitantanana dia ampahefatry ny fikambanana an'arivony eto an-tany.
Ny orinasa mpaninjara orinasa Oracle dia mahita asa amin'ny fanasitranana trano, sampan-draharaha ara-bola, fiarahamonim-bola, orinasa mpanolo-tsaina, focal sy ny fikambanana governemanta ao amin'ny governemanta sy ny orinasa, ny oniversite, ny sekoly sy ny toeram-pampianarana hafa, ny orinasa ao amin'ny sehatry ny teknolojia fampahalalam-baovao ary amin'ny sombin-javatra maoderina hafa ihany koa. Ireo manam-pahaizana dia miandraikitra ireo olana ara-pilaminana samihafa miaraka amin'ny tahiry Oracle ary koa miandraikitra ny fitazonana, ny fandehanana ary ny fanaraha-maso azy ireo amin'ny tolotra isan'andro.
Ireo manam-pahaizana IT dia miasa toy ny mpanadihady any amin'ny banky, ny injenieran'ny rindrambaiko PC, ary ny talen'ny orinasa sy ny rafitra Oracle, ary koa ny asa ho an'ny mpamorona PC, sy ny mpamorona tranonkala ary ny mpitantana. Afaka manolotra fampiharana vaovao izy ireo ary afaka manamarina ihany koa ny fiarovana ny rafitra, ny rafitra ary ny fampiharana. Azony atao koa ny miandraikitra ny famoronana sy ny fitazonana ny rafitra momba ny angona database ary mety misy ny asam-barotra voamarina miaraka amin'ny fahaiza-manao.
Ny kilasim-pifaneraserana, ny fiofanana ary ny ambony indrindra amin'ny tsipika Oracle dia manan-danja ho an'ireo fikambanana lehibe sy maîtrise. Ny ampahany lehibe amin'ny orinasa Oracle dia manana fandaniana avo lenta. VirtualBox, MySQL sy Oracle Linux dia tranga manokana marobe ary izany ambany sarany izany. Ny singa Oracle dia fototra ho an'ny fikambanana sasany, ary mandoa bebe kokoa izy ireo mba hanana izany fandrosoana mahery vaika izany ary manana fepetra haingana sy haingana. Ny Oracle DBA mifandraika amin'ireo asa momba ny asa dia miankina amin'izany ary ny tompom-pahazoan-dàlana momba ny orinasan'ny Oracle dia mahazo fanonerana avo lenta kokoa noho ireo izay manana ny mari-pahaizana RDBMS na ny mari-pamantarana ara-tsosialy. Ny fahaiza-mampiasa IT izay tsy niasa niasa tamin'ny Oracle database na ny injenieran'ny fangatahana Oracle dia hahita fa sarotra be ny manome ny vokatra tsara indrindra amin'ny fikambanana. Ny fanamarinana Oracle dia mandrisika anao hahomby amin'ny toeran'ny mpilalao am-pahamendrehana, raha mbola manome anao ny fahaizana rehetra izay tsy maintsy hiatrehanao ny andraikitry ny asa.
Ankoatra ny tahiry sy ny fampiharana, dia misy tsangam-bato maromaro maromaro kokoa ahazoana ny mari-pahaizana Oracle. Ny fitaterana ny fiofanana manokana amin'ny fiofanana amin'ny web dia ahafahanao manatontosa mari-tsoratra Oracle amin'ny solon'ny tranonao. Eto ianao dia tsy afaka manatanteraka ny asa tanana amin'ny Oracle DBA amin'ny fanatontosana asa tena marina, ary atolotry ny mpampianatra manam-pahaizana, ary amin'ny ankapobeny dia mahazo miditra amin'ny fitaovam-pianarana rehetra sy ny fananana rehetra izay mety hahatonga anao ho manam-pahaizana Oracle isan'andro.
amin'ny andro 5